OwaseHopeWell ohlelweni lamabonakude ku-SABC 1 | Eyethu News
OwaseHopeWell ohlelweni lamabonakude ku-SABC 1
“Uzobe ecula elinye icwecwe lakhe elithi ‘Ngyafa ngawe’ kulona lolu hlelo.”
UMazweni Ngubane ongumrepha waseHopewell ozovela ku-SABC 1
UTHI akasakwazi ngisho ukulinda umrepha wasendaweni yaseNsuka eHopewell njengoba ezowufulathela uMngungundlovu namhlanje (ngoLwesine) alibangise eGoli lapho eyoshutha khona kwesinye isiqephu sikamabonakude i-Yo TV edlala ku-SABC 1.
UMazweni Ngubane uthi leli iphupho lakhe eligcine ngokufezeka ukuthi abe esiteshini sikamabonakude esikhulu kangaka. “Ngithole i-email ngoMsombuluko ingazisa ngalezi zindaba ezimnandi angizange ngikholwe kodwa ngijabule kakhulu angisakwazi nokulinda. Ngizoshutha ngoLwesihlanu nalapho ngizobe ngicula khona iculo lami elisashisa izikhotha kuze kube imanje elisihloko esithi ‘Ngyafa Ngawe’,”kuchaza yena .
Uqhube wathi njengoba ezobe ekuloluhlelo uzobe ephakamisa idolobha laseMgungundlovu kanye nendawo adabuka kuyona eHopewell. “Lana eMgungundlovu ithalente likhona inkinga abantu abalinakile. Njengoba ngizobe ngilapha ngifuna ukukhombisa abantu ukuthi abangawalahli amaphupho abo uma unephupho lilandele lizogcina lifezekile.”
UMazweni akaqali ukuba avele esiteshini sikamabonakude enandisa njengoba ake avela esiteshini se-DSTV i-1KZN TV eshaya amanye amacwecwe awo. Lesi siqephu bekungakacaci sizosakwazwa nini kodwa i-Edendale Eyethu izonazisa uma seluphumile usuku.
Kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yomhlengikazi ‘obulawe’ ezoshada ngakusasa